Izinto ekufuneka zenziwe kumadoda aneenwele ezintle | Amadoda aQinisekileyo
Iimveliso ezine ezibalulekileyo zamadoda aneenwele ezintle
Amadoda aneenwele ezintle awasekho odwa. Banezixhobo ezingakumbi nangaphezulu ezandleni zabo ukufezekisa iinwele ezibalaseleyo, njengoko kunjalo kumlingisi uTheo James.
Iimveliso ezonyusa iinwele zikhule ngokwahlukeneyo, inani kwaye, ngaphezulu kwako konke, umgangatho. Apha sikubonisa ezona zibalaseleyo zokubandakanya kwinkqubo yakho.
Ukomeleza iinwele ezintle kufanele ziqale ngokuhlamba. I-Aveda Invati Exfoliating Shampoo ayizukubuyisa kwiintsuku xa wawuneenwele ezininzi. Nangona kunjalo, iya kukunceda wenze olona lukhulu kwizinto onazo.
Le mveliso bukhrim kwaye ilula ikhupha isikhumba entloko kwaye yomeleza iinwele ezintle. Imfihlo ilele kwi-densiplex, indibaniselwano yezityalo (kubandakanya i-turmeric kunye ne-ginseng) esebenza ukwenza iinwele zakho zibukeke zishwabene.
Ngaphambi kokuthambisa iinwele zakho, sebenzisa ileyibhile. Ayizukusebenza ilize, njengoko kusenzeka kwiimveliso ezininzi zolu hlobo. Kwaye kunjalo Iyakwazi ukwandisa umthamo weenwele zakho ukuya kuthi ga kwiipesenti ezili-10.
Imivumbo embalwa yale mveliso ine-panthenol kwizinwele zakho iya kunceda ukuyigcina inamanzi kwaye ikhuselekile. Ezi zinto zinokungahoywa, kuba ukwenza njalo kuya kuba negalelo ekwenzeni inkangeleko yabo ibe yecekeceke kwaye ingenabomi.
Amadoda aneenwele ezicocekileyo kufuneka athabathe amanyathelo okhuseleko xa kusenziwa ukumakisha isitayile sabo nge-hairspray, i-gel yeenwele kunye ne-wax. Lungisa, lungisa, kodwa uninzi luphela lukusinda.
Ukuba ufuna ukulungiswa, qiniseka ukuba luhlobo loxinano, olufana nolu oluvela kwindlu yaseKérastase. Ukongeza ekuqiniseni iinwele, ayishiyi intsalela kwaye inike iziphumo ezihlala ixesha elide.
Enye imveliso engenakuphoswa kwindawo yokugcina izixhobo ishampu eyomileyo. Ummangaliso weAussie Dry Shampoo Aussome Volume ikuvumela ukuba uhlambe iinwele zakho ngaphandle kwamanzi.
Yisebenzise phakathi kokuhlamba ukugcina umzimba kunye nomthamo weenwele zakho. Ezinye izibonelelo zefomula yayo, equlathe isicatshulwa sejojoba sase-Australia, kukuba inuka kamnandi kwaye iyahlaziya kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iimveliso ezine ezibalulekileyo zamadoda aneenwele ezintle
Iiwotshi ezilishumi ezona zilungileyo zakudala phantsi kwe-euro ezingama-60
UDavid Beckham, aMadoda aMnyama kumdlalo weLouis Vuitton